सेयर बजारमा बुझेर मात्र लगानी गर्नुस् : धितोपत्र बोर्ड | Ratopati
सेयर बजारमा बुझेर मात्र लगानी गर्नुस् : धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक परिष्टनाथ पौडेलले सेयर बजारमा बुझेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पौडेलले सेयरबजारको लगानीमा प्रतिफल जस्तै जोखिम पनि रहेकाले लगानीकर्ताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘धितोपत्र बजारमा प्रतिफल पाइएजस्तै जोखिम पनि उत्तिकै छ, विवेकशिल लगानीकर्ताको रुपमा लगानी गर्नुहोला । लगानीकर्ता कम्पनीको विश्लेषण गरेर मात्र गर्नुहोला । ’
बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शुरु गरेको छ । बोर्डले आजदेखि पहिलोपटक लगानीकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले पाक्षिक रुपमा लगानीकर्ता प्रशिक्षण शुरु गर्ने भनेकोमा यो पहिलो पटक शुरु गरेको हो । यही कार्यक्रममा पौडेलले लगानीकर्तालाई विवेक प्रयोग गरेर लगानी गर्न भनेका हुन् ।
महिनामा दुईपटक यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएपनि केही ढिला गरी कार्यक्रम भएको हो । हालसम्म १५० जनाले प्रशिक्षणका लागि नाम टिपाएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले एकपटकमा ५० जनालाई प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनेछ ।
यता बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बोर्ड देशभरको लगानीकर्तालाई जनचेतना जगाउन सफल भएको बताए । जनचेतना अभिबृद्धि गर्न भदौदेखि पाक्षिक रुपमा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी पनि कार्कीले दिए ।
दुर्गम जिल्लामा पनि सेयर बजारबारे देखिएको उत्साहले लगानीकर्ताहरु सचेत छन् भन्ने देखिएको डा. कार्कीले भने ।
जनतामा लामो समयसम्म नैराश्यता रहिरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह
काँग्रेसमा कोइराला परिवारको चहपहलः विरासत फर्काउन यसरी गर्दैछन् शक्ति आर्जन
प्रधानमन्त्रीको ‘एप’ मा १२ मन्त्री फेल : काम नगर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालय नै अगाडि
‘लुट्न सके लुट’ : युट्युवबाट हट्यो, माइतीघरमा घन्कियो (फोटो/भिडियो)
कार्यदल ‘असफल’ बनेपछि ओली–प्रचण्ड सक्रियः अब टुङ्गिएला नेकपाको एकता ?
पाकिस्तान पुगेका साउदी युवराजद्वारा २० अर्ब डलरको सम्झौता